Sida loo sameeyo emayllada Gmail "Compose Smart" | Androidsis
Sida loo sameeyo emayllada qaabka "Smart Compose" cusub ee Gmail
Smart Compose ama "Smart Compose" waa muuqaal cusub oo Gmail ah in aan ku bari doonno sida looga jawaabo e-mayl iyada iyada ah. Fudud waa hawl cusub oo saadaalinaysa waxa aan uga jawaabi doonno emaylka aan soo saarayno.
Maanta laga bilaabo waxaa la hawlgeliyay goorta Waxay ahayd muuqaal gaar ah oo ka mid ah taleefannada Google Pixel. Sida shaqooyinka kale ee gaarka ah, kuwani waxay waqti u qaataan inay soo muuqdaan oo ay marka hore maraan Pixels ka dibna ay gaaraan mobilada aan jecel nahay.
1 Laakiin waa maxay qoraalka Smart?
2 Ka jawaab emaylka adoo adeegsanaya Gmail Smart Compose
3 Sida loo demiyo Smart Compose ee Gmail
Laakiin waa maxay qoraalka Smart?
Smart Compose waa qaab cusub oo Gmail ah ku bilaabmay qaab tijaabo ah oo ku jira nooca desktop-ka. Kadibna waxay u gudubtay xisaabaadka G Suite sidaa darteed Oktoobartii la soo dhaafay, munaasabadda bandhigga Pixel (Waxaan horeyba u ogaanay waxyaabo ku saabsan mid ka mid ah Pixel-ka cusub), G weyn wuxuu ku dhawaaqi doonaa inuu yahay muuqaal gaar ah oo ka mid ah Google Pixel.
Ugu dambeyntii, Smart Drafting wuxuu u guuray Pixel 2 iyo moobiilka intiisa kale sida ay kugu dhici doonto adiga isla marka aad hesho nooca ugu dambeeya ee Gmail; iyo inay ahayd inaad cusbooneysiiso tan iyo maalmo kahor. Waxaan ka hadlaynaa nooca 9.2.3.
Caqli ku cabiro Gmail firfircoonaan ahaan laga bilaabo daqiiqadda ugu horreysa waxay ka firfircoon tahay serverka. Taasi waa, waad ka furi kartaa barkad kasta oo akoonnada emaylka ah ee aad ku leedahay firfircoonaanta moobilkaaga.
Ka jawaab emaylka adoo adeegsanaya Gmail Smart Compose
Waqtiga qorista qoraalkan, Smart Writing waa diyaar u ah dhowr moodel sida Pixel 2XL, OnePlus 6T, Pixel 2 iyo kuwa kale oo badan sida Galaxy S9 +. Si aad u ogaato haddii aan si dhab ah u adeegsan karno, marka aad bilowdo Gmail-ka waxaad ka heli doontaa boodhadh sharraxaya waxa astaantu ku saabsan tahay uun marka aad u socoto qorista emayl.
Laakiin waan sharaxeynaa sida looga jawaabo emaylka oo leh Smart Compose:
Waxaad bilaabeysaa qoritaanka emaylka si aad uga jawaabto xiriir kasta oo aad la soo xiriirto.
Markaad sameysid, Qoraalka caqliga leh ayaa adeegsan doona qoraal saadaalin ah inaan ku siiyo ikhtiyaarka aad ku aqbasho soo jeedinta aan soo jeediyay.
Tani waxay ka muuqan doontaa a midab cawlan oo fudud iyo inaad aqbasho waa inaad si fudud ugu muujisid midig isla qoraalka.
Taasi waa, uma baahnid inaad ku sameyso barnaamijka kumbuyuutarka, laakiin si sax ah halka qoraalkaasi uga muuqdo midab khafiif ah.
Haddii aad sii waddo qorista waxaad gebi ahaanba ka boodi doontaa qoraalka la soo jeediyey.
Xusuusnow tan iyo markii shaqadan la heli karo Ku bilow adeegsiga qoraalka saadaalinta sida saacaduhu u socdaan iyo maalmaha. Markaa hadaadan helin qoraal saadaalin ah marka hore, ha walwalin, waqti sii.
Sida loo demiyo Smart Compose ee Gmail
Way dhici kartaa taas Uma aragtid shaqadan cusub ee Gmail waxtar loo yaqaan Smart Compose. Xaqiiqdii waxaad door bidaysaa inaadan isticmaalin oo aad gebi ahaanba iska indhatirto isticmaalkiisa. In kasta oo aad adigu ikhtiyaar u leedahay inaad uga hawlgasho mid ka mid ah koontooyinkaaga halkaasoo, daadadka emaylka awgood, aad u baahan tahay Gmail si ay kuu gacan qabato si aad u maamuli karto dhammaantood.
para dami Gmail smart ka koobnaan:
Waxaan tagnaa goobaha Gmail.
Waxaan doorannaa koontada waxaan rabnaa inaan joojino Smart Compose.
Waxaan hoos ugu laabaneynaa illaa aan ka helno xulashada Smart Compose.
Waxaan ku soo celineynaa isla nidaamka xisaab kasta in aan ku xirnay taleefankeena gacanta ee Gmail.
Waxaad horeyba u shaqeyn jirtay Smart Compose ee Gmail.
Astaantan cusub ee macmiilka iimaylka Google ayaa shaqeynaya laga soo qaatay nooca 9.2.3. Haddii sabab kasta ha noqotee aadan heli karin, xir barnaamijka oo dib u bilow mar kale. Tani waa in loo hawlgeliyaa si loo tijaabiyo haddii ay runti kugu habboon tahay in Google ay saadaalinayso waxa aad rabto inaad uga jawaabto xiriiriyahaaga.
Sheeko xiiso leh in wuxuu gaaraa dhammaan taleefannada Android wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad saadaaliso qoraalka si aad ugu qortid mahadsanid Smart Writing. Mid kale oo ka mid ah kuwa cusub ee ay Google nagu qasbeyso inaan ka feejignaano waxyaabaha muhiimka u ah Google I / O. Waqtigan xaadirka ah waxaan ku jirnaa Maarso, laakiin wax badan uma harsaneyn bisha Maajo ee ku jirta Android Q.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida loo sameeyo emayllada qaabka "Smart Compose" cusub ee Gmail
Nova Launcher beta 6.1 wuxuu soo bandhigayaa Google Discover qaabka mugdiga ah iyo dhibcaha tirada
Habka mugdiga ahi wuxuu u yimaadaa barnaamijka farriinta Viber ee cusboonaysiinta ugu dambaysa